N'ogbe soy wax yankee style esi ísì ụtọ kandụl ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Mmeri
soy wax yankee style na-esi ísì ụtọ kandụl
Ọkụ kandụl na-esi ogologo oge
Ihe kandụl ọ bụla nwere 13-14 ounces ma nwee oge ọkụ nke 75-80 awa nke dị ogologo karịa ndị ọzọ.
Size: 10.1cm (Obosara) * 13cm (Elu)
Anyị na-enye ODM & OEM ọrụ ndị ahịa.
Anyị ipuiche esi ísì ụtọ iko kandụl, Tea-lamp, Pillar kandụl, Votive candles, kandụl ịgụ, wicks na ndị ọzọ ngwaọrụ nke candles.We raara onwe anyị nye-eweta nkasi obi, ịke na àgwà ka anyị ahịa na 20 afọ nke ahụmahụ.
Agba, isi, logo na mbukota nwere ike ịhazi ya !!!
Ihe onwunwe Iko kandụl kandụl + soy waks + mkpuchi mkpuchi
Nha 10.1cm (Obosara) * 13cm (Elu)
Wax arọ 385g
Mkpokọta nha 875g
Nke gara aga: onyinye yankee ịke kandụl na-esi isi
Osote: yankee style na-esi isi kandụl
nwa iko okpukpo kandụl
ogidi udi aromatherapy kandụl-acha anụnụ anụnụ / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ